विवाहअघि गर्भवती भएका बलिउड अभिनेत्रीहरु - Patipauwa
विवाहअघि गर्भवती भएका बलिउड अभिनेत्रीहरु
आइतबार, ०४ जेठ २०७७, ०७ : २४
अहिले कतिपय बलिउड सेलिब्रेटी विवाह नगरी सन्तानका एकल आमा वा बुवा बनेका छन् । जस्तो एकता कपूर, उनकै भाई तुसार कपूर, करण जौहर आदि । उनीहरु सेरोगेसीबाट सन्तानका मातापिता बनेका हुन् । वि वाह नगरी सन्तानका आमाबुवा बन्नु अब बलिउडको लागि आश्चर्यको विषय अब रहेन । तर, सेरोगेसीको हकमा मात्र । अन्यथा विवाह नगरी गर्भवती हुनु सजिलै पचाउन सक्ने कुरा होइन । जबकी थुप्रै बलिउड अभिनेत्री प्रेम सम्बन्धमा रहेका बेला गर्भवती भएका थिए ।
यसको सिलसिला श्रीदेवीबाट सुरु भएको हो । श्रीदेवीको केही बर्षअघि निधन भइसकेको छ । उनकी छोरी जान्ह्वीले भने बलिउडमा करियर सुरु गरेकी छिन् । श्रीदेवी यस्ती अभिनेत्री हुन् जसले अभिनेताहरुको भिडमा आफ्नो बेग्लै स्टारडम बनाइन् । थाहा भएकै कुरा हो, श्रीदेवीले निर्माता बोनी कपूरसँग विवाह गरेकी थिइन् । अनौठो कुरा त के भने, विवाहअघि नै उनी गर्भवती भएकी थिइन् ।
प्रसंग अमेरिकाबाट सुरु हुन्छ । श्रीदेवीकी माता अमेरिकामा उपचाररत थिइन् । त्यही बेला बोनीले श्रीदेवीको खुब सहयोग गरे । श्रीदेवी पग्लिइन् । १९९६ मा अचानक श्रीदेवीले बोनीसँग बिवाह गरेर सबैलाई अचम्मित तुल्याइदिइन् । किन उनले यति गुपचुप र हतारमा बिवाह गरिन् त ? कौतुहलता जाग्ने नै भयो । पछि थाहा भयो, उनी बिवाह अघि नै गर्भवती भएकी थिइन् । श्रीदेवी स्वंमले यो कुरालाई स्विकार गरेकी छिन् ।
महिमा चौधरी पनि अघिल्लो पुस्ताकी अभिनेत्री हुन् । दिल क्या करे, धड्कन, दिल है तुम्हारा लगायतमा अभिनय गरेकी महिमाले बलिउडमा परदेश फिल्मबाट करियर सुरु गरेकी थिइन् । महिमाको खास नाम ऋतु चौधरी हो । निर्देशक सुभाष घईले ऋतुको नाम महिमा बनाइदिएका हुन् । यसको पछाडि पनि रमाइलो प्रसंग छ । खासमा निर्देशक सुभाष घईलाई ‘म’ अक्षरबाट सुरु नामकी अभिनेत्री फलिफापयुक्त हुने विश्वास गर्थे । त्यही अनुसार उनले ऋतुलाई महिमा बनाइदिएको बताइन्छ ।
उनी महिमाले अचानक बबी मुखर्जीसँग विवाह गरिन् । विवाह गर्ने कुनै तारतम्य नै नभई उनले अचानक यस्तो निर्णय किन गरिन् ? चियोचर्चा हुने नै भयो । अन्नत के थाहा भयो भने महिमा विवाहअघि नै गर्भवती भइसकेकी थिइन् । विवह भएको केही महिनामै उनी आमा बनिन्, एक छोरीकी ।
अमृता अरोरा बलिउड अभिनेत्री, मोडल तथा टेलिभिजन प्रस्तोता हुन् । अर्कोतर्फ उनी मलाइकाकी बहिनी हुन्, जसले केही बर्षअघि अरवाज खानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन् । कुरा अमृताकै गरौं । भनिन्छ, अमृताले जतिबेला विवाह गर्दै थिइन् त्यसबेला उनी गर्भवती थिइन् । मलाइकाले व्यवसायी शकीलसँग विवाह गरेका हुन् । प्रेम सम्बन्ध रहेकै बेला उनी गर्भवती भएकी हुन् । विवाह भएपछि उनले खुलासा गरेकी थिइन्, ‘म आमा बन्नेवाला छु ।’
फिल्म राजतिलकको सुटिङका क्रममा कमल हासन र सारिकाबीच रोमान्स सुरु भएको थियो । अचानक दुबैले बिवाह गरे । भनिन्छ, त्यसबेला सारिका गर्भवती थिइन् । नीना गुप्ताले त सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै खुलासा गरिन् कि, ‘म गर्भवती छु ।’ त्यसबेला उनको बिहे भएकै थिएन । नीनाले आफ्नो गर्भमा हुर्कदै गरेको बच्चाको पिताको नाम समेत खुलाइन् । बच्चा जन्मियो पनि । पछि थाहा भयो कि, क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स उनको पिता हुन् ।
किन हुन्छ यौन इच्छामा कमी ?
किन अश्लिल कुरामा मान्छेले चासो राख्छ ?
सञ्जय दत्त कुलतको नशामा फसेका थिए…
वर्षालाई चीन घुम्ने रहर
होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा मोटाउन थाले पुष्प
चीनमा फिल्म हल खुलाउन ‘एभेन्जर’ र ‘अवतार’ पुनःरिजिल हुने
बुटवलमा मिष्टर रुपन्देही प्रतियोगिता हुदै
इन्द्रेणीले गर्यो सामाजिक परिक्षण
रुपन्देहीका बिपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा बितरण
उपेक्षित उष्णप्रदेशीय रोगको निदानका लागि सञ्चारकर्मीको सहयोग आवश्यक
स्थानीय सरकारसम्म नागरिकको पहुच पुराए मात्रै लोकतन्त्र सबल हुने
अपाङ्ग आश्रमलाई सानिमा लाईफको खाद्यान्न सहयोग
व्यबसाय स्थानान्तरण र बर्गिकरणका लागि प्रदेश सरकारले नीति बनाउदैछ : उपाध्यक्ष क्षेत्री
कोरोनाले रोजगारी गुमेका अतिविपन्न ५ लाख परिवारलाई राहत लिन निवेदन आह्वान
इन्टेग्रिटी आईकन २०२१ सार्बजनिक
रुपन्देहीका रिटर्नी भन्छन् : अबसरका सुचना पाउनै मुश्किल
बुटवल, रूपन्देही, नेपाल
© PATIPAUWA.COM 2022, ALL RIGHT RESERVED.